နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ကြိုးစားသွားမည် ပါတီအမည်ပြောင်းရေး ကိစ္စ - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဖြစ်သည့်နည်း ဖြင့်ကြိုးစားသွားမည်ဟု ဦးကိုကို ကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဇွန် ၂၄ ရက်က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ် မြောက်ရေး ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီရုံးခန်းတွင်ပြုလုပ်သည့် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီသည် ယခင်က ရှစ်လေးလုံးပါတီအမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီး ယခုအခါ ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထပ်မံညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်မတိုင်မီ ပြင်ဆင်မပြီးပါက ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပယ် ဖျက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ”ပြင်လို့တစ်ခါပြောတယ်။ ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါမကြိုက်ဘူး ထပ်ပြင်လို့ပြောတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားတယ်။ ဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင် သုံးကျောင်းပြောင်းတယ်၊ သုံးခါပေါ့။ ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော် တရားလွန်သွားပြီလို့ပြောရမှာ ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး ဥပဒေအရလည်း ထောက်ပြပြီးပြီ၊ ဆွေးနွေးပြီးပြီ။ အခုတစ်ခါထပ်ပြင်ခိုင်းတယ်၊ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ ဆက်လုပ် ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ သို့သော် သေချာတာကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပါတီစုံညီအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၈ ရက်တွင် ထပ်မံပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နည်းလမ်းနှစ်ခုဆုံးဖြတ်လိုက် ကြောင်း၊ ပထမနည်းလမ်းမှာ ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များမပြင်ဆင်ဘဲထားရှိပြီး ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ကော်မရှင်က ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရုပ်သိမ်းပြီးမှ အသစ်ပြန်လည်ပါတီမှတ်ပုံတင် ရန်နှင့် ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ ပါတီအမည်ပြောင်းရန်နှင့် ပါတီအလံ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပြင်ဆင်ရန်တို့ဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းအချက်များကို စုံညီအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ် ရပ်ထူထောင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ဥပဒေအရမငြင်းနိုင်သည်အထိ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယခုပါတီအမည်၊ အလံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲနေခြင်းမှာလည်း ဥပဒေအရ ငြင်းနေသည်ဟု ၎င်းအနေဖြင့် မမြင်ကြောင်း၊ ဥပဒေအရ မငြင်းနိုင်ရေးအတွက် ယခုလည်းကြိုးစားနေကြောင်း၊ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်မူ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်အောင်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုမထင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့မျှော်မှန်းထားသကဲ့သို့မဖြစ်လာပါက မိမိတို့သည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည့် ၈၈ ခုနှစ် တစ်ပါတီစနစ်ကတည်းက နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုင်လာသူများဖြစ်သဖြင့် မည်သို့မှမထူး ဆန်းကြောင်း၊ ဆိုင်းဘုတ်နှင့် အမိုးအကာမရှိသော်လည်း နိုင်ငံ ရေးလုပ်တတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
”အခုနာမည်ကြီးပါတီတွေ ရော နာမည်သေးပါတီတွေရော မရှိခင်အချိန်ကတည်းက ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံရေးစလုပ်ခဲ့တာ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ကျွန် တော်တို့ ကြိုးစားပါနေလျက်နဲ့ ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန် တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ထိရောက်မလာဘူးလို့၊ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလက်ရှိ အစိုးရဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့အစိုးရ၊ ဒီအခြေအနေကို အများကြီးမျှော်လင့်ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဒီလက်ထက်မှာ အဲဒီလောက် ကြီးတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ် လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ သို့ သော် မဟုတ်ခဲ့ရင်ကောဆိုရင် ပေါ့။ တစ်ကပြန်စရတာပေါ့။ ကျွန် တော်တို့အားလုံးက တစ်တောင်မဟုတ်ဘူး။ ဇီးရိုးကစခဲ့ရတာ။ ဘာပါတီမှမရှိခဲ့တာတောင် ကျွန် တော်တို့လုပ်လို့ ပါတီတွေတည် ထောင်ခွင့်ရလာတာ။ အဲဒီအခြေ အနေအထိတော့ရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဒီချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်မှု အထက်မှ လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ခြင်း လုံးဝမရှိ
ဂျာမနီ - ဆွီဒင် ပွဲအပြီး နှစ်ဖက်နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကစားသမားများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်၊ ဂျာ??
(၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး မနှောင့်နှေးစေရန် အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အကြား အမြန်ဆုံ?
အယ်လ်နီညိုနှစ် ဖြစ်သော်လည်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း မီးခိုးမြူသိပ်သည်းစွာ ဖြစ်ပေါ်ရန်မရှိကြောင်?
ပခုက္ကူ၌ ဆိုင်ကယ် စီးလာသူထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ